Kudhinda - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Kana tichitsikisa mabhuku kana kuverenga zvirimo online kana kutsikisa padhijitari, tinofanirwa kufunga zvimwe zvinhu sekugadzira dhizaini inopa mushandisi nhau dzichangoburwa nekukasira, kugadzira mabhuku edhijitari kuwanikwa, nezvimwewo Saka kukwezva vaverengi, kupa kune akasiyana kuverenga masitayera (mafirita, akakwenenzverwa mifananidzo vs misoro), kugadzira hombe dhatabhesi yezvinyorwa (zvichiramba zvichiwedzera) kuwanikwa nyore mukati meapp kana webhusaiti pasina chakakura chinonzwisisika ndicho chinodiwa chikuru cheindasitiri yekutsikisa nhasi. Izvo zvinodikanwa kuti uwedzere kusvika kune yakakura mushandisi base uchienzaniswa nekungodhindisa midhiya kutenderera. Zvekugovana zvemagariro maficha zvinowedzera kusvika kwevhirivhi kwechinyorwa & kudzikisira nguva yekutengesa.
Newgenapps dhizaini uye inovandudza nharaunda yakanaka uye yakakodzera yezvinyorwa zvemadhijitari zvine hushamwari uye zvinofunga zvese ruzivo rwevashandisi uye zvinangwa zvebhizinesi. Isu tinounza mhinduro dzemadhijitari kuzadzisa hupamhi hwakawanda hwezvinodiwa, kupa masimba mabhureki eese saizi kuti vakure simba ravo redhijitari nevateereri. Isu tinopawo makore mhinduro kune vatengi vedu.
1. Kutungamira chizvarwa
2. Kubloga uye zvemukati
3. SEO uye SMO
4. Kutsanangudza iyo yakakwana UI / UX yekukwirisa kwevatengi kuchengetwa
5.Kubvunza pane epuratifomu mapuratifomu kuti atariswe zvichibva pane analytics uye yakanangwa misika kudzidza
6. Kugadzira chinongedzo chekudyidzana pakati peCMS uye Mobile Apps
7. Kugadzira nharembozha
8. Cloud based uye AWS mhinduro
9. Kugamuchira dhizaini yekugadzira uye mawebhusaiti